Onyankopɔn ne Abram yɛɛ apam (1-21)
Wɔhyɛɛ nkɔm sɛ n’asefo behu amane mfe 400 (13)
Onyankopɔn tii ne bɔhyɛ mu kyerɛɛ Abram (18-21)
15 Eyinom akyi no, Yehowa ka kyerɛɛ Abram wɔ anisoadehu mu sɛ: “Abram, nsuro.+ Meyɛ wo kyɛm.+ W’akatua bɛyɛ kɛse paa.”+ 2 Ɛnna Abram kae sɛ: “Awurade Tumfo Yehowa, dɛn na wode bɛma me? Wo ara wunim sɛ minni ba, na nea obedi m’ade ne Elieser+ a ɔyɛ Damaskoni.” 3 Abram toaa so sɛ: “Wommaa me aseni* biara;+ akoa* a ɔwɔ me fi na obedi m’ade.” 4 Ɛnna Yehowa nso ka kyerɛɛ no sɛ: “Ɛnyɛ ɔbarima yi na obedi w’ade, na mmom w’ankasa wo ba* na obedi w’ade.”+ 5 Afei ɔde no fii adi na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Mesrɛ wo, ma w’ani so hwɛ soro, na sɛ wubetumi akan nsoromma yi a, kan.” Na ɔkae sɛ: “Saa na w’asefo* bɛyɛ.”+ 6 Ogyee Yehowa dii,+ na Onyankopɔn buu no sɛ ɔyɛ ɔtreneeni.+ 7 Afei ɔka kaa ho sɛ: “Mene Yehowa a ɔde wo fi Kaldeafo kurow Ur mu bae sɛ bɛfa asaase yi.”+ 8 Ɛnna ɔno nso kae sɛ: “Awurade Tumfo Yehowa, dɛn na mede behu sɛ ɛbɛyɛ me de ampa?” 9 Afei ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Fa nantwi a wadi mfe abiɛsa, apɔnkyebere a wadi mfe abiɛsa, odwennini a wadi mfe abiɛsa, aburuburuw ne aborɔnoma ba brɛ me.” 10 Ɔde ne nyinaa bae na ɔpaapaee wɔn mu abien abien, na ɔde ɔfã biara too hɔ ma ɛne ɔfã foforo dii nhwɛanim, nanso nnomaa no de, wampae wɔn mu. 11 Na nnomaa a wodi nam besisii mmoa no nam so, na sɛ wɔba a, na Abram apam wɔn. 12 Akyiri yi, ɛrekɔ anwummere no, Abram daa hatee na esum kabii a ɛyɛ hu baa no so. 13 Afei ɔka kyerɛɛ Abram sɛ: “Hu sɛ w’asefo* bɛkɔ akɔyɛ ahɔho wɔ obi man so, na ɛhɔfo de wɔn bɛyɛ nkoa na wɔateetee wɔn mfe 400.+ 14 Nanso mebu ɔman a wɔbɛsom wɔn no atɛn,+ na ɛno akyi wɔde agyapade bebree befi hɔ akɔ.+ 15 Wo de, asomdwoe mu na wobɛkɔ akɔka w’agyanom ho, na wubenyin akyɛ ansa na wɔasie wo.+ 16 Nanso awo ntoatoaso a ɛto so anan mu no, w’asefo bɛsan aba ha,+ efisɛ bere nnya nsoe sɛ Amorifo nya wɔn bɔne so akatua.”+ 17 Bere a owia tɔe na esum kabii bae no, fononoo bi a wusiw fi mu ne ogyatɛn* a ɛredɛw bɛfaa mmoa a wɔapaapae wɔn mu no ntam. 18 Saa da no, Yehowa ne Abram yɛɛ apam,+ na ɔkae sɛ: “Mede asaase yi nyinaa bɛma w’asefo,*+ efi Egypt asubɔnten no ho kosi asubɔnten kɛse Eufrate ho:+ 19 Kenifo+ asaase, Kenisifo asaase, Kadmonfo asaase, 20 Hitifo asaase,+ Perisifo asaase,+ Refaimfo asaase,+ 21 Amorifo asaase, Kaananfo asaase, Girgasifo asaase, ne Yebusifo+ asaase.”
^ Nt., “ɔba.”